Automotive Jobs in Dubai the best companies to finding a job
Umhlahlandlela Wemisebenzi Yezimoto eDubai
Umsebenzi eMpumalanga Ephakathi
UJerry Varghese Emisebenzi Yomhlaba Wonke
Hamba ku-interview e-Dubai
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at December 31, 2017
Imisebenzi Yezimoto e Dubai
Imisebenzi e Dubai Automotive Amathuba
Automotive Jobs in Dubai, that is to say when you searching ukuthola ithuba elisha. Inkampani yethu ithanda ukwethula kini izinkampanini ezihamba phambili zokusebenzela e-UAE. Ngenxa yalesi sizathu, sibheke isihloko sethu futhi uthole ukuthi singakusiza kanjani. Kubakhanti abanolwazi embonini yemisebenzi yezimoto.
Ngakho-ke uma uneminyaka engu-3-25 yecala eliphumelelayo. Unethuba lokubekwa njengomuntu ozokhethwa emhlabeni wonke ngaphandle kwezwe lakini. Phinda ufune umsebenzi omusha from the Caribbean, U.S, Canada, I-Saudi Arabia even Asia with Malaysia and even more countries in-between. In December 2016, Dubai City Inkampani starts recruitment in the United Arab Emirates (UAE). So, it is really worth it to apply for Automotive Imisebenzi e-Dubai.
Lokhu kuhlangana nezinkampani zeFortune 500 eDubai. Iza ndawonye izinto ezimbili ezibalulekile Zokuqashwa kabusha. Umkhakha wezimoto nakanjani uguqula imakethe. Futhi-ke, ivulelwe abaphathi bazo zonke izinhlobo. Futhi yemukelwa ukhetho lwamazwe aphesheya ne-UK, US, Abase-Asia naseMpumalanga Ephakathi kanye nesipiliyoni sokuthengisa.
Ukuqaphela amaholo akhokhelwa kahle. Ama-bonus amasistimu kanye nokugcina ukuya emangalisa amathuba okuthuthuka komsebenzi. I-UAE ikakhulukazi IDubai ne-Abu Dhabi akuyona nje indawo enhle yokusebenza. But an exciting and vibrant indawo to settle for a life with family and izingane.
Imisebenzi yezindaba zezimoto kanye nemidlalo yemidlalo
Njengengxenye yentuthuko yokuqashelwa eMpumalanga Ephakathi. Wethu Dubai City Inkampani isebenzisana namanye amakhulu e-UAE. Futhi abaphathi abahlonishwayo beHoto Yezimoto abahlonishwayo nabaqasha abaqashile. Into yokuqala okufanele uyikhumbule ukuthi asigcini ngokubambisana nabanye izinkampani eDubai. Kepha njengamanje sifunela abaqashi abasha abangathola imisebenzi embonini yezimoto.
Njengamanje siyaqasha ngoba motor trade experienced managers in UAE. For example, if you have umsebenzi experience as the front-line staff umphathi. With automotive technician experience. You can be placed on the UAE, Qatar or Saudi Arabia. However, if you searching for higher wages we can help you specifically with Dubai and Abu Dhabi. Europe, U.S, and Canada experienced Okhethwe ngamathalenta ahlonishwa kakhulu emazweni aseGCC. Kungakhathalekile kuyo yonke le ndawo, sizama ukusiza abantu abazobona ukhetho. Futhi aletha ukhetho kubaphathi be-HR yazo zonke izinhlobo zezimoto.
Lezi zinsuku a indawo emakethe yokuncintisana kakhulu kuwo wonke ama-candidate. Ukuqala siqasha umenzi abasebenzi base Dubai. Futhi ngifuna abamele izinkomba zokusebenza. Ngaphezu kwalokho, uma unesipiliyoni sezezimali nomshuwalense singakuthola ebhodini. Yebo, kunjalo ngifuna ukhetho ngolwazi lwensizakalo yamakhasimende. Ngokubambisana nabasebenzi bezandla imisebenzi yemishini yezimoto.
Akusho ukuthi abaqashi kanye namaqembu abathengisi ngaphakathi kwamazwe we-GCC. Kakade ukuqasha abasebenzi baseNdiya nabasePakistan. Ngakolunye uhlangothi uma ufuna ukubambisana nezinkampani ze-UAE. Kufanele ubheke ukuthi lezi zinkampani zinganikeza kuwe. Isibonelo, iPorshe e-Dubai isivele iqasha abasebenzi base-non-Emirates ezikhundleni eziphezulu zokuphatha emabhizinisini abo. Empeleni, asikho isizathu kuwe uma ufuna imisebenzi embonini yezimoto.
Amazwe e-GCC kanye ne-Faculty ye-Automotive Agency
The car ibhizinisi is rapidly growing in the UAE. At the same time, you can get benefits from it and gain the necessary experience. Honestly ukuba ibekwe endaweni ezinzile enkampanini enhle. Udinga ukuba namakhono aqinile nolwazi lwezimoto. Uma kunjalo, abathengisi be-GCC nabaqashi bakho esizayo ngokuletha kuphela abaqokelwa okuhle kakhulu emabhizinisini abo.
Ngaphansi kwalezo zimo, kufanele uqale ukufuna ukuzwana. Nezinhlangano ezihamba phambili zezimoto emazweni eCCC. I-2018 kuze kufike ku-2020 nakanjani iba yiminyaka ebalulekile eletha izinkampani ezihola etafuleni. Ngakho-ke lapho wena ukubhekana nomqashi e-Dubai City. Kufanele uthole isevisi yabo kokubili ehlukile futhi ehleleke kahle. Ikakhulukazi imisebenzi yokuthengisa yezimoto.
Abaphathi bezentengiselwano zamazwe ngamazwe kanye nabaphathi bezokuhweba. Ngenxa yalokho, ulethe ithalente elisha ku-GCC to motor business in the Gulf region. You should feel free to contact top-rated automotive companies in the UAE. Layisha kabusha immediately to Izinhlangano zaseDubai zithole ithuba elisha. Ungabashayela futhi ubabuze indlela yokuhlukile eya kumphathi wayo wakwa-HR. Njengomphumela walolu cwaningo lomsebenzi wokuqashwa kwabasebenzi ngokuqinisekile kungakusiza ekutholeni umsebenzi omusha ngaphakathi kwebhizinisi lezimoto.
Umsebenzi we-GCC ukuthi ungayisebenzisa kanjani izinkampani ezingcono kakhulu?
Amathuba ku-GCC awafani namanye amazwe. Ungathola ibhonasi esebenzayo njalo ngenyanga. Ngaphezu kwalokho, ukuhweba kwamakethe kwandisa amathuba akho okuthola isikhundla esiphakeme sokuphatha. Nge inkampani yokushayela ebonakalayo njengePorsche noma uFerrari. Ngakolunye uhlangothi, izimoto ezintsha zezimoto zitholakalayo ukukhuthazwa.
Njalo lapho uzobe ubhekana nemenenja yakwa-HR. Ngephuzu elilodwa zama ukuhlaba umxhwele umphathi wokuqasha ngokusemandleni akho. Unalokhu engqondweni ukuthola othintana nenqubo, i-50% yempumelelo. Zama ukubuyekeza izibuyekezo ezijwayelekile ezivela kubaphathi be-HR. Futhi kunjalo sesha umkhangiso omusha wemisebenzi oyingqayizivele e-UAE izinhlangano zezimoto. Njalo usho ukuthi uyatholakala hamba e-UAE uma ungumuntu ozokhethwa emhlabeni wonke.
Njalo usebenze kunoma yiziphi izindima ezinikeziwe futhi udlulise yonke inqubo yokuxoxisana ngisho nangaphezulu ngefoni. Qiniseka ukuthi uzosingatha zonke izifundo ukubiza ukuthi uthola kumphathi wokuqashisa noma umqashi. Zama ukuba yisikhathi futhi uqoqe ulwazi oluthile kusuka kuwebhusayithi yenkampani.
Ubufakazi obuqandayo bumkhakha wezimoto okhulayo inani lezikhundla zomsebenzi. Noma kunjalo, uma unomlando omude wokuqashwa. And a strong desire to become a senior manager and leading key manager in the industry. You should drive forward and apply for the best companies. Such as Audi, Mercedes, Maserati and move your career forwards up to CEO Isikhundla.
Indlela engcono yokusebenzisa ukulandela imiyalo engezansi. Dlula zonke izinkampani zethu bese uthumela i-CV yakho kuzo. Ngemuva kwalokho linda ukuthi umlingo wenzeke. Ukuphela kwento ekuvimba ukuhambisa umsebenzi wakho esigabeni esiphezulu uwena!.
Faka isicelo semisebenzi yakho entsha nemisebenzi yezithuthi e Dubai
Uhlu lwezinkampanini eziqhamukayo nabaqashi ukuthola umsebenzi
Faka isicelo semisebenzi yezimoto e Dubai
Umsebenzi we-Porsche e-Dubai
Faka isicelo lapha: https://www.porsche.com/middle-east/_dubai_/aboutporsche/jobs/
I-Dubai Porsche ingenye yezinkampani ezihamba phambili. Ungaqala umsebenzi wokubonisana nokuthengisa, ophethe izingcingo noma isikhundla sokwamukela abantu. Noma ungaqala isikhundla njengoba I-Sales Consultant. Imisebenzi kuWindowsheya ihilela njalo ukukhangisa. Wonke umuntu uphupha ngaleyo moto yezemidlalo. Nge-Porsche, ungakha umsebenzi omangalisayo.
Ibhizinisi lezimoto lidala amathuba e-Dubai. Futhi wenze ukuhola ngaphakathi kwendawo emakethe Dubai and Abu Dhabi. Porsche has an intelligence performance management team. They are all ready to help you with your career. Porsche company is much more than just an exclusive sports car manufacturer in the I-United Arab Emirates.
Inkampani ihlala ibeka amazinga amasha embonini yezimoto. Le nkampani kufaka phakathi eyodwa yemenenja ehamba phambili yokuthengisa kanye nabasebenzi. Uma ufuna ukwakha izimoto ezihlukile le nkampani ikulungele. Le nkampani ngaso sonke isikhathi zinikeza into eyingqayizivele yabasebenzi bayo. Ngenxa yalokho ukuqasha abantu abasha bese ubatholela ezikhundleni zokuphatha.
I-Porsche yinkampani ekhula ngokushesha eDubai. Ngaphezu kwalokho, banemibono eqinile yokuthuthuka. Wonke umuntu uyasebenza cwaninga ngamanani nefilosofi. Futhi kufanele uthole umsebenzi omusha nale nkampani. Imisebenzi yobunjiniyela bezimoto e-UAE a ukucaca umbono wabasha abafuna umsebenzi.
Kungani Porsche e Dubai City?
Inkampani yaseDubaiuzzlehe ivumela isisebenzi ukuhlala ngentuthuko yomsebenzi weqiniso. Imigomo yenhlangano eyinhloko ukuhlangabezana nezidingo eziphezulu. Njengoba bekulokhu inkampani ephawuliwe iyaziqhenya ngayo. Akunandaba noma ngabe ukuphi. Futhi kuqhubeke lokho abanye abaphathayo e-Dubai.
Ngokuqinisekile, i-Porsche izimisele ukuba yinkampani ekhula ngokushesha kakhulu. Le nhlangano eyichaza kabusha i-HR ikhawula ngokuqhubekayo ku-2018. Baphinde babeka imisebenzi emisha ku-Expo 2020. Empeleni, inkampani yabeka amazinga amasha eDubai.
I-Porsche entsha kakhulu izimoto ziba njalo njalo into ekhethekile. I-Porsche futhi ilindele imiphumela engavamile eqenjini lokuthengisa. Babeka izinga lokuthengisa eliphakeme uma kukhulunywa ngenzuzo yenkampani. Ngokwalesi sizathu, inkampani izama uku zuza okungaphezulu kokujwayelekile. Ukuthola umsebenzi nePrincis namuhla naku ikusasa yisinqumo esihle kunazo zonke.
Ngaphansi kwalezi zimo, inkampani incike kakhulu kubasebenzi nabaphathi. Ngokuvamile, uma usebenzela le nkampani. Kumele njalo uzimisele ukuhamba leyo mile eyengeziwe ukufinyelela ilitshe lokuthengisa.
Faka isicelo semisebenzi yezimoto e Dubai - Porshe
Umsebenzi we-Career Ferrari Corporation e-Dubai
Faka isicelo lapha: http://corporate.ferrari.com/en/career
Isisebenzi ngasinye esine-Ferrari siyimpahla eqinile ebhizinisini labo. Ngaphansi kwalezo zimo, abakwaFerrari abafuna ukhetho abangakwazi wandise amathuba okuthengisa kanye nokwenza inzuzo. Futhi ukuphatha le nkampani yase-Italy kwesokudla.
Kodwa-ke, uma usezikhundleni zokuphatha ungafinyelela kahle. UFerarri ungumkhiqizo omkhulu womndeni lapho usebenza nabo uzwa sengathi ufana neqembu. Ungasayiphathi ithemba lamathuba amasha ebhizinisi. Kufanele ube ngumuntu onokuxhumana okuqinile. Ngaphezu kwalokho, kufanele wabelane ngolwazi lwebhizinisi lakho lemoto. Futhi nsuku zonke ngcono yakho amakhono kanye neziqu zemiphumela emihle.
Inkampani inomqondo oqinile wokuqashwa kwesakhiwo. Okwamanje bathandana nenselelo ye-70th Annivers. Ngakho-ke ukunikezwa la maphuzu ukusebenza nabo kukwenza ufune ukuthuthuka okuqhubekayo emsebenzini wakho. Ukufingqa kanye namasethi amahle amakhono ongawathola nsuku zonke. Qhubeka nempumelelo yakho yomsebenzi wokunwetshwa komhlaba wonke kweFerrari Inkampani e Dubai inhlangano.
I-Ferrari yindawo enhle yokusebenza?
Ngokwengxenye enkulu, iFerrari yinkampani enhle ukusebenzela ngaphakathi. Abaphathi bayalazi inani lomsebenzi ngamunye. Ngokunikezwe la maphuzu, indlela enhle kakhulu yomuntu ngamunye izokusiza ukukhushulelwa esikhundleni sokuphatha. Inkampani ukukhula kwethimba emfundweni kanye nokuthengisa. Ngakho uma ubasebenzela. Ukuphathwa okuzuziwe kuphela kuphela lapho abasebenzi babo bezwa ukuthi basendaweni efanele, ngesikhathi esifanele. Ngamaholo akhokhelwa kahle ngesikhathi kanye nendawo efanele yokukhuthazwa esikhathini esizayo.
Le nkampani yase-Italy nayo iyakukholwa lokho ikhwalithi yezimoto iyisivumelwano esiyinhloko ebhizinisini. Ikhwalithi nobungako bezimoto zayo ngeke kwehlukaniswe. Ukuphathwa okuhle ngaphakathi kwenkampani kusiza abantu abasebenza futhi bakhulise umsebenzi wabo e-Ferrari Corporation.
Yingakho izimo zokusebenza ziphelile. Futhi imvelo ngaphakathi kwenkampani inhlalakahle kubo bonke abasebenzi. Futhi izinto ezibaluleke kakhulu ezibaluleke kakhulu zihlale zilalele. Ngakho-ke siyakukweluleka ukuba qala ukusebenza kule nkampani uma uvela eNingizimu Afrika.
Faka isicelo lapha: https://careers.fcagroup.com/our-brands/maserati-home/
Another brand company you should try ukuthola umsebenzi is Maserati. Simple this company has strong Italian story. For the most part, is a global icon in the car industry. In a word, elegance says all about this company. The new Sondela indlela yokuphila ecebile. Into yokuqala okufanele uyikhumbule udinga ukuthi ube neminyaka eqinile yesipiliyoni sokuthengisa. Ukusebenzela iMaserati embonini yezimoto. Lapho ufaka isicelo somsebenzi kule nkampani. Abaphathi be-HR ngokungcono ukhetho olunolwazi emgqeni wokunethezeka.
Amakhono okuthengisa ahlukile kanye nokuxoxisana. Futhi amafa akhazimulayo okuhle kakhulu Inkampani eyakha brand ivelele emakethe. Ukubeka ngenye indlela inhlonipho nenhlonipho ngesimo nale nkampani. Intando kukusize uthole umsebenzi. Ngakho-ke lapho ufaka isicelo sesikhundla neMaserati. Kufanele uzithengise ngokubonisa kakhulu lokho ungandisa amathuba okuthengisa nawenzuzo.
Ngakho-ke lapho usebenza neMaserati. Kumele phatha amakhono amakhono amasha futhi wenze ibhizinisi elinengcindezi ephezulu, Inkampani isebenza endaweni ephezulu kakhulu ukuze lokhu, imoto yenkampani yaseYurophu isifanele isikhathi sakho. Faka isicelo sewebhusayithi yabo yomsebenzi bese uthola kabanzi mayelana nokusebenza nesimo nabo.
I-Maserati iye yaholela endleleni yebhizinisi lezimoto
Ungakwazi yini ukuveza nokukhombisa izimoto zamanani ?. Uma impendulo inguyebo ke iMaserati iyinhlangano inkampani enhle kakhulu kuwe. Le nkampani yaqala ukusebenza isikhathi eside esidlule futhi kwakungu-1st Disemba 1914. Kusukela ngaleso sikhathi inkampani ngokushesha iba umkhiqizi wemoto oyi-Italy oyedwa. Into yokuqala okumele uyikhumbule umlando wenkampani. Njengomfanekiso wenkampani ephumelelayo kumsunguli wayo u-Alfieri Maserati nabafowabo.
Ngokuhamba kwesikhathi ukuthanda kwabo imboni yezimoto nethalente ebhizinisini lezimoto kufake isandla ekwakheni le nkampani izindinganiso ezisemqoka. Abaphathi abaphezulu kule nkampani bahlala bethi. Ukuqamba kanye nobuhle ngenselelo entsha kwakha le nkampani. Kusukela i-1914 umoya wokujaha wakha inkampani emangalisayo. Ngakho-ke uma ungathanda ukuba yingxenye yenkampani edumile. Kumele lungiselela i-CV yakho ne-Interview ezingeni eliphezulu kakhulu.
Faka isicelo lapha: https://www.bugatti.com/contact/
Izimoto ezinkulu, ezimangalisayo, ezibizayo. Uhlobo lwe-Bugatti uqasha e-UAE. IBugatti iluhlobo oluhle kakhulu. Ngabe sidinga ukwethula kunoma ngubani lo mkhiqizo omangalisayo? Akunjalo, izindleko zalezo zimoto zibanga nge-1Million USD. Futhi kuphela abantu abacebe kakhulu emhlabeni jikelele bayakwazi ukuzithengela bona ngokwabo.
Imisebenzi e-Mercedes-Benz Dubai
Faka isicelo lapha: https://mercedesbenzme.com/me/en/footer/about-us/careers/
Irekhodi le-Solid Track ye-sales experience eyimpumelelo. Sengisho nje, kuzokusiza ukuthola umsebenzi in Mercedes Benz. Company Ukuqasha sales executives in Dubai. Mercedes at the moment has retail opportunities for you. The company motto is shaping your career like never before. So for this reason ukuhlola amathuba emisebenzi.
Ngokuvamile, inethiwekhi yokusabalalisa neyomthengisi ingaba ukukhetha okuhle. Iwebhusayithi yeMercedes, ungabhekabheka ngamathuba abo emisebenzi yamanje. Ngaphansi kwalezo zimo, ungathumela imiyalezo ngokushesha. Futhi njengoba kuye kwabonwa kwiwebhusayithi ungamane uthumele imininingwane yakho kubaphathi be-HR Mercedes Benz.
Ngaphambili, inethiwekhi yabo yebhizinisi. Imane ifaka izimakethe zemisebenzi yezimoto eziyishumi nantathu. Kuphi Yebo ungawuthola umsebenzi. IMercedes Benz ibhizinisi elinamabhizinisi amakhulu futhi liya ngokukhula njalo. Phezu kwezimakethi zobunjiniyela bezimoto eMiddle East. Zonke izisebenzi ezintsha zeMercedes zikhethwe ngokucophelela. Ukuqala ngendawo yabo emangalisayo kanye neqembu lokuthengisa eliyingqayizivele nelingxoxo.
Imisebenzi yaseMiddle East imoto esifundeni. Uyaziwa kahle abesifazane besifazane bamazwe angaphandle. Mane nje ngenxa yemvelo yomsebenzi oshukumisayo uletha imisebenzi. Kuleso simo, inkampani iheha abantu bendawo emakethe yezimoto eDubai. Kanye nenani eliphakeme labavakashi abathola isikhundla sokuthengisa kumaMercedes. Ukubeka ngenye indlela, ungaqala ukusebenzela omunye wabalingani abakhethiwe beMercedes Benz kulesi sifunda. Noma ungafaka isicelo sesikhundla ekomkhulu.
Ngesikhathi esifanayo, i-Mercedes-Benz izokunikeza. Amazing futhi inselele amathuba emisebenzi e-United Arab Emirates. Ngokuthuthuka kwesikhathi eside somsebenzi. Empeleni, wonke umzingeli womsebenzi omusha ukuhlola amasiko athakazelisayo ase-Middle East. Lapho bejoyina le nkampani enezilinganiso ezinhle.
Umsebenzi e-Aston Martin Dubai
Faka isicelo lapha: https://www.astonmartinlagonda.com/careers
Ngendlela efanayo, sethula i-Aston Martin. Ngamanye amazwi, uma unesithakazelo ekusebenzeni kanye nabaphathi abakhulu. Ithimba labaphathi be-Aston Martin lingomunye womlingani olinganisiwe kakhulu emhlabeni. Amathuba okuhamba ngezimoto nge-brand ehlonishwayo yezimoto ezifana ne-Aston Martin. Kuzokusiza ube CEO esikhathini esizayo esiseduze.
Enye iphuzu eliyinhloko uma unekhono lobuciko. Ungakwazi ukujoyina ithimba lokuklama le-Aston Martin. Inkampani idala amamodeli amasha. Futhi uhlanganise nabo ngobuchwepheshe obunqunyiwe. Ngakho kukhona ukhetho olukhulu lwabazingeli bamasha e Dubai. Noma kunjalo, unayo isipiliyoni sezobunjiniyela. Ungabheka ubuciko obuhle kanye nethuba elihle lokuqeqeshwa kweqembu labasebenzi.
Ukusho lutho ngomsebenzi ophakeme no-Aston Martin. Ungaba umphathi nelinye lamagatsha abo okuthengisa. Yize lokhu kungaba yiqiniso ukusebenza ngalezi zimoto nsuku zonke kuyinjabulo yangempela.
Ngaphezu kwakho konke ukusebenza okukhethekile imvelo e-United Arab Emirates. Futhi u-Aston Marin Dubai oshesha kuhambisane nezidingo nakanjani uyakuvuza ngokukhula komsebenzi onamandla. Kwiwebhusayithi, ungakwenza thola izikhundla zamanje kubantu abafuna umsebenzi wasePakistan.
Imisebenzi e-Dubai e-Audi
Faka isicelo lapha: https://www.audi.com/en/career.html
Kunezikhundla eziningana nge-Audi eMpumalanga Ephakathi. Ngokuphambene nalokho, i-Audi e-Dubai yasungulwa njengenkxaso egcwele ye-AUDI AG ku-2005. Indawo yokusebenza e-Audi inhle kakhulu. Ehlangothini elingalungile lase-Dubai. Kunezinhlobo eziningi zokunethezeka. Ngakho uma wena qala ukusebenza nenhlangano. Uzoba nehhovisi lokuthengisa lesifunda ukubuka intuthuko yakho. Kodwa ukuveza uhlangothi oluhle ne-Audi. Uzobekwa phakathi kwebhizinisi le-Dubai car. Futhi ungakhuthazwa ngenxa yokukhulisa amakhono akho. Futhi ngaphezu kwalokho, ungaba nomthwalo wemfanelo. Imakethe ye-Audi eMpumalanga Ephakathi.
Le nkampani isebenza futhi iqondisa yonke imisebenzi yokuphatha abaphathi. Ukuqeqesha ukumaketha okusha abaphathi kanye nemisebenzi elandela ukuthengisa e-United Arab Emirates. Enye iphuzu eliyinhloko ungasebenza kubathengisi abazimele esifundeni noma e-Saudi Arabia. Ngakho-ke usekelwe ekuhlangeneni nakho isikhundla sakho somsebenzi kuzoba lukhulu kakhulu.
Ngenhloso yokukusiza. Ngokuvamile iqembu le-Audi lisebenza ngaphakathi kwenkampani efana nezezimali. Le nkampani isebenza njenge-VW division. Ngakho-ke, kokunye, kuzoba kuningi ngokushesha ukuhlunga izindaba zethu.
Ekugcineni, i-Audi okwamanje ifuna amalungu amasha. Njengoba kuye kwaphawulwa uma ubheka ukuhlangana nabalingani abasha. Ngaphezu kwalokho, ungathanda ukusebenza emisebenzini eyinselele ngaphakathi kwethimba elincane le-Audi. Kumele cabanga ngesicelo sakho sokusebenza ngezikhundla ezilandelayo kwiwebhusayithi yabo.
Xhumana Napha: https://dubai.bentleymotors.com/meia/en/contact
I-Bentley Dubai, njengethengisi elisemthethweni leMotor Motors eMiddle East. Ngakho-ke, i-Bentley eDubai kungenzeka ibe ukukhetha okuhle kwamathuba wemisebenzi eseMpumalanga Ephakathi.
Le nkampani inabaholi abanesipiliyoni esihle. Bonke basebenza ukuqoqa umuzwa omuhle kakhulu kumakhasimende abo. Ngakho-ke, zibheke kuwebhusayithi yabo bese uzama ukukholisa ibhodi labo labaphathi ukukunika isikhundla esihle.
Le nkampani futhi iyi-brand enhle eDubai. Futhi kwiwebhusayithi yabo, ungaxhumana nabantu abaningi futhi uzobona ukuthi benzani empeleni ngokwebhizinisi. Ukusebenzisana nale nkampani Yezimoto eDubai ubuso obuhlukile esifundeni se-Gulf izokunikeza indlela ekhanda yekusasa lakhoe uhlobo lwentuthuko yokuthengisa okuphezulu noma umnyango wobunjiniyela.
Xhumana Napha: https://www.acura.com/contact-us/
I-Acura uhlobo lwebhizinisi lemoto yezimoto, okugxilwe kakhulu kwezemidlalo. Kodwa kufanele futhi ubathumele ulwazi olusheshayo mayelana nesimo sakho somsebenzi. Ungathumela i-imeyili ku-Acura ithimba noma uxoxe nabo engxoxweni ebukhoma.
Kufanele nakanjani ubheke isigaba sabo sokuxhumana kwiwebhusayithi. Inkampani yethu, noma kunjalo, ingeza le webhusayithi ohlwini lwezinkampani zezimoto ngethemba ukuthi uzokuthola inani elihle lalokho.
As a well-based company in Idolobha lase-Dubai. This brand is a huge white playset international business. Moreover, this organization is actually hiring people around the globe. So no matter where you are actually coming from you can still get a job with them. As we all know 80% of the ukusebenza kuyo kuvela eNdiya nasePakistan. Lokhu kungenxa yokuthi akunandaba ukuthi ngabe empeleni uzama ukusuka eDubai. Usenethuba futhi sicela usebenze kwiwebhusayithi yabo. Ngakho-ke lokho kuzokunikeza ubuciko obusha be-Haygood eDubai.
Loluhlobo empeleni luluhlobo olukhetheke kakhulu futhi iningi labasebenzi alikwazi ukuthola umsebenzi nabo. Kodwa-ke, uma unesipiliyoni esihle, nakanjani uzoba nokukhetha futhi uzokwazi ukuthola umsebenzi nabo. Lezi zinkampani empeleni eziqasha abaphathi beziteshi zisebenza nabaqondisi abangochwepheshe kanye nama-CEO.
I-BMW Group (e-Dubai)
Faka isicelo lapha: https://www.bmwgroup.com/en/careers.html
Ngemuva kwakho konke iBMW Group esemthethweni. Ukuveza ukuthi yizo ungenisa phezulu kweDubai City. Inkampani eyakhiwe eSharjah naseNyakatho Emirates. Ngaphansi kwalezo zimo i-AGMC BMW. Ngokujwayelekile, inkampani yeBMW ingene ngonyaka wayo weminyaka eyi-40th e2016. Ngaphambili, BMW AGMC kuze kube manje. Inkampani ikhiqiza omkhulu izibalo kanye nempumelelo e-Dubai. Ngakolunye uhlangothi, inkampani iqhuba ibhizinisi eminyakeni engamashumi amane edlule.
Ngalokhu engqondweni, i-BMW ilawula ibhizinisi iminyaka engaphezu kwe-40. I-BMW AGMC ihambise izimoto ze-premium imisebenzi emisebenzi e-UAE nakumaNdiya. Imisebenzi yabaphathi bezokuthengisa ku-BMW yenza imikhiqizo kanye nezinsizakalo zabo zibe yinto engcono kakhulu emakethe. Ngesikhathi esifanayo, amakhasimende athande izimoto zemidlalo ezikhethekile.
Izimoto ze-BMW Group inkampani enhle kakhulu. Inhlangano yasungula ithimba lokuthengisa ku-1976. Futhi empeleni, i-BMW AGMC kusukela ngaleso sikhathi iye yaba yinto ebaluleke kakhulu imisebenzi yezimakethe ezihlinzeka ngezikhundla zezezimali. Futhi le nkampani inikwe ilayisensi yi-BMW Group eMpumalanga Ephakathi. Ngakolunye uhlangothi, ku-2016, i-AGMC yaqashelwa ngokugcwele. Futhi bathola igama njengabadayisi abadayisa kakhulu emhlabeni jikelele.
I-Alfa Romeo Middle East
Xhumana Napha: http://www.alfaromeo-me.com/contact
Le nkampani enamagatsha amaningi eMiddle East. Isibonelo, ungazithola eBahrain, Kuwait, Qatar naseLebanon. Ngakho-ke, kuningi ongakhetha kukho njengomuntu ofuna umsebenzi ukuthola indlela efanele.
I-Alfa Romeo, umkhiqizo omuhle. Izimoto ezinhle kakhulu futhi ezithandwayo sezivele zithengiswe ngaphansi komphathi wale nkampani yomkhiqizo. Ungakwazi ukungena lapha Dubai Alfa Romeo. Futhi uthemba ukuthi le nkampani izoba ngumqashi wakho olandelayo.
Ngakho-ke uma unesipiliyoni ungathola ithuba lokusebenza nezinkampani ezinjengalesi. Kukhona ukuxhumana okuhlinzekwe ngaphezulu futhi sicela ukhulume ngakho bese bazokuqhubekisela phambili esigabeni somsebenzi. Ngiyethemba uzothola umsebenzi omangalisayo eMelika nale nkampani.
Izimoto zeToyota ku-UAE
Xhumana Napha: http://www.toyota.ae/site/enquiry/
Izimoto zakwaToyota eDubai ngele-At Al-Futtaim Motors. Kuyiqembu elikhulu futhi ukuhlinzeka ngezikhala eziningi emakethe yemisebenzi eMiddle East. Ngakho-ke, le nhlangano ihlinzeka ngezimoto ezisezingeni eliphezulu zakwaToyota. Futhi ukuthola abaphathi abalula akufanele kube yinkinga uma unesipiliyoni.
Inhlangano eyaziwa kakhulu. Ukubuyekezwa kwe-intanethi njengothando kuphela kule nkampani. Ngakho uzothola ithuba ngemikhiqizo ephezulu njengale. Ngokuvamile, izinkampani zezimoto zihlala zihlinzeka ngemali ewusizo kakhulu yabasebenzi babo. Futhi ungalindela ngakolunye uhlangothi ukuqeqeshwa okuhle futhi ubeke kahle ukuqeqeshwa kwawo.
Xhumana Napha: https://cadillac.libertyautos.com/site/contact-us/
Inkampani yeCadilac ayidingi ukwethulwa kunoma ngubani. Uma ufuna izikhala zemisebenzi ezintsha zeZithuthi njengomphathi noma umeluleki wokuthengisa. Le nkampani kungaba ukukhetha kwakho isenzo. Vele ngoba kunendaba ende ngemuva kohlobo lweCadilac e-United States naseYurophu.
Okwamanje inkampani ayinazo izikhala ezikhangisiwe kwiwebhusayithi yabo. Noma kunjalo, kufanele ube nokubukeka futhi uxoxe ngisho neqembu lokuthengisa. Isikhathi esithile Umbuzo osheshayo olula uholela emsebenzini ophelele.
Xhumana Napha: https://uae.sellanycar.com/contact
I-Sall Noma yimuphi inkampani yezimoto isebenza emhlabeni wonke. Le nkampani ingaphezu nje kokungena kwezimoto zokuthengisa imoto. Banikeza isilinganiso semoto mahhala. Amakhasimende akwazi ukuqhathanisa amanani abo futhi abone ukuthi abanye abantu bathini. Ayikho ingxenye yomsebenzi nemisebenzi kodwa kufanele isebenze uma uwasebenzisa isicelo esisheshayo se-imeyili.
I-Auto Trust Multi Services
Faka isicelo lapha: https://www.autotrustuae.com/career
Le nkampani iyingxenye ye-AW Rostamani Automotive Group. Noma kunjalo, kunesigaba somsebenzi wabo kanye nemisebenzi. Ukusebenza kule nkampani kuzothuthukisa ukusebenza kwakho embonini yezimoto. Ikakhulu uma sikhuluma ngemakethe yaseDubai ne-Abu Dhabi.
I-Copart Middle East
Xhumana Napha: https://www.copartmea.com/
I-Copart eMiddle East inezimoto ezingaphezu kwe-200 ezithengiswa cishe nsuku zonke. Futhi ngokuvamile, le nkampani yinhle indawo yokubheka umsebenzi.
Ikampani yaseCopart iyinkampani ehola phambili yokukhangisa inthanethi yabanikazi bemoto. Le portal ithengisa kabusha izimoto eziyizigidi ezingu-2 njalo ngonyaka kusukela ziqale. Kuze kube manje, ngaphezu kwezikhungo ze-170 emhlabeni jikelele ukuthumela isikhangiso kwiwebhusayithi yabo.
Izibalo zenkampani zisebenza ku-2012. ICopart yafaka imithombo yayo eMpumalanga Ephakathi. Le nkampani ilangazelela ukuthuthukiswa emazweni amaningi aseGulf.
I-Al Shamali Auto Parts Group
Faka isicelo lapha: http://www.alshamaligroup.com/careers.php
Enye inkampani enhle yokuqala ukuqashwa kuzoba yi-Al Shamali Auto Parts Group. Le nkampani enikeza amathuba emisebenzi emangalisayo ku-Commercial Bank of Dubai, Kwakha, Baniyas Square, Deira, Dubai. Ngakho-ke, uma wenza i-UAE. Kufanele ube nokubukeka mathupha noma uxhumane nabaphathi bawo online.
Le nkampani yinhlangano egxile kakhulu kumakhasimende. Njalo uqhubekela phambili ngenqubo efanele nokubukeka expats ngentshiseko, izisebenzi ezinamandla, abadlali beqembu abaguquguqukayo ngentshisekelo yokuletha insiza enhle yamakhasimende kumakhasimende abo eDubai idolobha. Ngakolunye uhlangothi, le nkampani inenqubo elula kakhulu yokuqasha. Ukuphela kokufanele ukwenze nje ukuthumela ukubuyela kubo.
I-AW Rostamani Group
Bangenye inkampani eyazi kahle i-United Arab Emirates ukusebenza. I-AW Rostamani Group nakanjani kufanele icatshangwe. Inkampani akuyona noma iyiphi inkampani yokuthengisa kepha ikhiqiza izingxenye zezimoto. Ngakho-ke, uma unesipiliyoni sobunjiniyela ebhizinisini lezimoto. Faka isicelo kusixhumanisi esinikezwe yinkampani yethu. Futhi hope uzothola umsebenzi enkampanini yamaphupho njenge-AW Rostamani Group.
Xhumana Napha: https://www.rmamotors.com/contact-us/
Ama-RMA Motors athengisa izimoto zeklasi le-premium. Le nkampani iyakwazi ukuthenga nokuthengisa izimoto emakethe ye-UAE. Ngaphezu kwalokho, ukuxhasa ngezimali izimoto. Ngakho-ke, ukukhuluma okuningi, kuzofanela ukubanikeza ucingo. Babheke kakhulu ochwepheshe abasebenza kakhulu eqenjini labo. Ngakho-ke, uma wazi ukuthi ungayiphatha kanjani injini ye-elekhthronikhi nemoto ezingeni eliphakeme kufanele ucabangele isikhundla esihle sobunjiniyela nabo.
Manje sisebenzela Imisebenzi Yezimoto e Dubai!
Umsebenzi wezimoto ku-UAE - Imisebenzi e-Porsche naseFerrari UAE
I-UAE yemisebenzi yezimoto e Dubai
Ingabe ufuna ukuthola UJob e Dubai? yize lokhu kungaba iqiniso singakusiza. Simply qala umsebenzi omusha ku-The I-UAE noma i-Kuwait!. Ngokuqinisekile kufanele ubuke nezinkampani zokuqasha. Ngaphambi kokuhamba, buka Inkampani ye-Dubai no.1 futhi indawo yomsebenzi yokuqashwa e-UAE. Kufanele ngempela ukusebenzisa ne-CV yakho.
Layisha kabusha Emadolobheni Akhula Ngokushesha Kakhulu Emhlabeni! - Dubai City Inkampani.
Imisebenzi nge-Aetna International
Uhambo lomsebenzi wokuzingela
I-LinkedIn Feeder Career Sohaib Hasan